အိပ်ဆောင် ဓားပလာယာစုံ – Shwe Mandalay Shop
CCTV CAMERA အမျိုးမျိုး
Shwe Mandalay Store Facebook Page
Shwe Mandalay Shop
Home / လုံခြုံရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး / အိပ်ဆောင် ဓားပလာယာစုံ
View cart “သုံးဆစ်တုတ်(ခလုတ်ပါ)” has been added to your cart.
အိပ်ဆောင် ဓားပလာယာစုံ quantity
ဈေးနှုန်း – 15000 ကျပ်
ဓါးဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ” ဆေး ” မသုံးတတ်ရင် ” ဘေး ” တဲ့ဗျ။
နေ့စဉ် လူမှုဘဝမှာ မီးမပါလို့မပြီးသလို ဓါးမပါလို့လည်းမပြီး။
အကိုင်အတွယ်မတတ်ရင် မီးက ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။
ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ကအစ စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်း လယ်ယာ တောင်ယာ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တို့ထိ ဓါးသုံးရပါတယ်။ မသုံးတတ် အပြောအဆိုမညက်ရင်တော့ လက်ရှတာကစပြီး အာမခံမရတဲ့အမှုအထိ ကြီးမားတယ်။
ဆိုင်မှာ ၂ပတ်၁ခါလောက် အမြဲလာဝယ်တဲ့ အဘတယောက်ရှိတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကနေ ဆိုင်ရဲ့တစ်လမ်းကျော် ၁၅လမ်း တော်ဝင်ဆေးခန်းမှာ လာပြရင်း တုံကင်စောင့်ရင်း ဆိုင်မှာ စိန်ပြေနပြေ လာဝယ်လေ့ရှိတယ်။ ခါးမကောင်းလို့ မြေးလေးတယောက်တွဲလာရတယ်။ ငယ်တည်းက ဓါးဝါသနာပါလို့ဆိုပြီး ဝယ်စုလာတာ။ ဆိုင်က ၅၀၀တန်ဓါးကအစ ကင်ဒိုဓါး၃လက်တွဲ ၁၅၀၀၀၀အထိ အားလုံးအိမ်မှာရှိနေပြီ တဲ့။ ဖေ့ဘွတ်တော့ မသုံးဘူး။ သူလည်း တခြားသူဆီက လက်ဆောင်ရလို့ ဆိုင်ကိုရောက်လာတာ။
Multi tool ဆိုရင် အသစ်အသစ်ထွက်သမျှ ဝယ်ပြီးသားပဲ။ ကိုယ်တိုင်က ဝါသနာပါလို့ ဝယ်တာ။ အရင်က ကျောင်းဆရာဆိုတော့ တပည့်တပန်းပေါတယ်။ တပည့်တွေ လာကန်တော့ရင် တခုစီ လက်ဆောင်ပေးတာ။ သဘောတွေကျ ပီတိတွေဖြစ်လို့။ မနှမြောတဲ့အပြင် နောက်ထပ်လာတောင်းရင်တောင် ဝမ်းသာနေတာ။ ဝါသနာဆိုတာ အဲ့ဒီလိုဗျ။
ဆိုပါတော့ Multi tool တွေလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ အိပ်ရင်တောင် ဓါးကိုခေါင်းအုံးအောက်ထားတယ်။ သွားလေရာ ဓါးလည်းဆောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုး ဆိုရင် ဒီပစ္စည်းလေး ညွှန်းချင်ပါတယ်။
ခေါက်ဓါး ၇.၆လက်မ (ဓါးသွား၃.၃၊ လက်ကိုင် ၄.၃)
ဝက်အူလှည့် – + ၆မြှောင့် Lကီး အစုံ၁၀မျိုး
ပုလင်းဖောက်တံ၊ နို့ဆီဘူး စည်သွပ်ဘူးဖောက်တံ၊ ပလာယာ
အတော်စုံစုံလင်လင်ပါတဲ့အပြင် သံချေးမတက်နိုင်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းထားလို့ ရေရှည်အသုံးခံပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်၊ ခရီးသွား၊ ဆားဗစ်ထွက်ရင် ခါးမှာသပ်သပ်ရပ်ရပ် ချိတ်သွားဖို့ ထူထူထဲထဲ အိတ်တစ်လုံးလည်း ပါပါသေးတယ်။
ဒီတခေါက် ဆေးခန်းလာပြရင် ပိုက်ဆံသာများများယူလာခဲ့ပါဗျ။
အဘအကြိုက် Multi tool တွေ အများကြီး ရောက်ထားပါတယ်။
အဘပြောနေကျ စကားအတိုင်း ” မင်းတို့ဆိုင်လာရင် ဓါးပြတိုက်ခံရသလိုပဲ ပါသမျှပြောင်တာ။ မလာပဲလည်း မနေနိုင်ပြန်ဘူး” ဆိုတာ။
Multitool knife set designed withasafe locking mechanism, can be safer, easier to operate, serves the purpose for camping, fishing, or hiking, as well as for everyday use around the house or office.
multi purpose pliers is assembled by 8 useful tools:
knife & serrated cutter
Specification of Multi tool knife:
Unfold length: 7.35 inches
Fold length:4.4 inches
Material: 430C stainless steel
Package include: 1x multitool, 1x nylon shealth, 9x different screwdriver bits
1.please be careful about the knife blade when you are taking the knife out.
2.This non-industrial grade pliers does not have powerful torque and is not suitable for heavy work.
⛩️ဆိုင်ဖွင့်ထားပီး ပစ္စည်းများအားလုံး In stock ထားကာ Retail ရောင်းပါတယ်။ဆိုင်မှာ
မျက်မြင် ကြည့်ရှု့ပီး ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ လာရောက်၍ ရွေးချယ် 🛒ဝယ်ယူနိုင်သလို…
🌐လာရောက်မဝယ်နိုင်လို့/အဝေးကမလို့ ပို့ပေးပါ ဆိုလျင်လည်း သင့်တင့်သော ပို့ဆောင်ခဖြင့်
🇲🇲 မြန်မာတနိုင်ငံလုံး သို့ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရအောင် 🚕 ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ပုံထဲကနှင့်အပြင် ပစ္စည်း/ကွာလတီ တထပ်တည်း ကျရန် 💯 အာမခံပါသည်။
📦ပစ္စည်း မှာယူမယ် ဆိုရင်
Hotline ✆ 09974413514 ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူပါ။
(စာတိုက်ပို့/ကားတင်ပို့/အိမ်အရောက်ပို့ ဘယ်လိုပို့ပို့~ငွေချေပီးမှသာ ပစ္စည်းပို့ ပေးပါတယ်)
💰 ငွေလွှဲရန် 💰
Bank account နဲ့ပေးချေမယ်ဆိုရင်
29430199901405101 ( KBZ )
0101600100065347 ( CB )
0052201010051222 ( AYA )
004110190000803 ( YOMA Smart Acc )
004144118000447 ( YOMA Saving Acc )
003100100079917 ( UAB )
0880131088003179017 ( MAB )
09402521913 ( CB Pay Acc )
09402521913 ( KBZ Pay Acc )
Bank ပိတ်ရက်ဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ် 09974413514 ကို
စတာတွေ နဲ့ လွှဲပေးလို့ရပါတယ်။
မည်သည့် အကောင့်မျှ လုံး၀ လုံး၀ မသုံးပါ။
အကုန်လုံး ရိုးရိုးသာ လွှဲပေးရပါမယ်။
ငွေလွှဲပီး ✆ 09974413514 ကိုဖုံးလေးတချက် ဆက်ပေးပါ ခင်ဗျာ။(လူရောပီး မမှားအောင်ပါ)
🔓မနတ် ၉ နာရီ
🔒ညနေ ၆ နာရီ
မောင်ကံထူးစတိုး နှင့် ကပ်လျက်
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တလေး စတိုး ဆိုင်သည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌါနတွင်
တရားဝင် ပိုင်ရှင်အမည် ဦးနန္ဒာထွန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမှတ် ( လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂/၈၉၂ ) ဖြင့်
တရားဝင် ရောင်းချနေသော စတိုးဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့်
မိတ်ဆွေများ အလိုရှိသော ပစ္စည်းများကို
စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မိတ်ဆွေ အကယ်၍ ယခုအချိန် မလိုအပ်သေးလို့ စိတ်မဝင်စားပါကလည်း
နောက်တစ်ချိန် လိုအပ်လာသည့် အခါတွင် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန်၊
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ လိုအပ်သည့်အခါ လမ်းညွှန် နိုင်ရန်
မိမိ၏ Wall တွင် Post ကို Share ခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ပါသည်။
Be the first to review “အိပ်ဆောင် ဓားပလာယာစုံ” Cancel reply
Ks15,000.00 Ks7,000.00 Add to cart
Alarm Lock ကိုင်းရှည်ပါ
Ks20,000.00 Ks12,000.00 Add to cart
Ks40,000.00 Ks26,000.00 Add to cart
Ks8,500.00 Ks5,000.00 Add to cart
Shwe Mandalay Store
ဖုန်း 09974413514 ။ 09790412003
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊမႏၱေလး စတိုးဟာ ၁၀-၇-၂၀၁၆ ကေနစျပီး တည္ေထာင္လာခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ။